Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ememe n'ụsọ osimiri bụ nhọrọ kacha amasị ndị Britain
Ọ bụghị ihe ijuanya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị na-eme ezumike chọrọ ịga n'ọdụ ụgbọ mmiri nke anwụ na-acha - karịsịa ka oge okpomọkụ nke Britain na-ewutekwa ndị ọbịa.
Oge ezumike mmiri na-efe efe bụ nhọrọ kacha amasị ndị Briten chọrọ ezumike esenidụt n'afọ na-abịa, na-ekpughe nyocha wepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) nke WTM London wepụtara.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (43%) na-eme atụmatụ ịgbapụ gaa n'oge ezumike si mba ọzọ kwuru na ezumike osimiri ga-abụ nhọrọ kachasị ha.
Nhọrọ nke abụọ kachasị ewu ewu bụ ezumike obodo, nke otu ụzọ n'ụzọ atọ (31%) nke ndị zaghachirinụ kwuru. Nhọrọ ndị ọzọ ewu ewu bụ ezumike njem (16%), ụgbọ mmiri (15%), ịdị mma (8%) na ski (7%).
Ikekwe n'igosi eziokwu ahụ bụ na amachaghị njem na 2020 na 2021, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ (23%) kwuru na ha chọrọ ịga ogologo oge, ebe 17% nwere afọ ojuju na obere oge ezumike.
Usoro ntinye akwụkwọ dịkwa ka ọ na-egosipụtakwa nsogbu zuru ebe niile nke nkwụghachi ezumike na ịkagbu n'etiti ọrịa a, ebe otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa (31%) na-ekwu na ha ga-ede akwụkwọ ngwugwu, naanị 8% na-ahọrọ ebe obibi na akụ na ụba nkekọrịta - dị otú ahụ. dị ka AirBnB - ebe 8% ọzọ na-ekwu na ha ga-enwe obi ụtọ na ezumike DIY.
Nchoputa a sitere na WTM Industry Report, nke gbara 1,000 ndị na-azụ ahịa ihe gbasara atụmatụ njem ha - na 648 n'ime ha kwuru na ha ga-achọ inwe ezumike esenidụt n'oge okpomọkụ na-abịa.
Mgbe ndị na-eme ntuli aka jụrụ ajụjụ banyere ebe ha ga-achọ ịga, ebe kacha mma bụ Spain, ndị ọkacha mmasị Europe ndị ọzọ dị ka France, Italy na Gris na USA - bụ nke amachibidoro ndị na-eme ezumike Britain kemgbe ọrịa ahụ malitere. jide n'aka na March 2020.
Nnyocha ahụ ga-abụ ozi nnabata maka azụmaahịa njem ntụrụndụ na-adịghị mma, bụ nke gbalịsiri ike na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke ọgba aghara, mgbochi na ozi ndị na-agbagwoju anya sitere n'aka ndị ozi.
Nnyocha nke Abta tụrụ aro na ntinye akwụkwọ n'oge ọkọchị 2021 bụ 83% gbadara na 2019 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ụlọ ọrụ njem na-akọ enweghị mmụba na ntinye akwụkwọ 2021 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, n'agbanyeghị mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ahụ nke ahụla ihe karịrị 80% nke ndị okenye UK tozuru oke ama ama kpamkpam.
bọọdụ ndị njem si na ebe ndị dị ka Spain, France, Italy, Greece na USA na-akwalitela ọrụ nkwado ha n'oge ọkọchị iji hụ na mba ha na-ebu ụzọ na azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa.
Ndị ụgbọ elu na ndị na-arụ ọrụ na-ewulite ikike ka ọ na-alọghachi, ọkachasị mgbe emechara ihe mgbochi dịka sistemu ọkụ okporo ụzọ na ule PCR.
Simon Press, WTM London, Onye isi ngosi ihe ngosi, kwuru, sị: "Anyị atachiela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke mmachi njem na mgbagwoju anya, ụkpụrụ dị oke ọnụ, yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị na-eme ezumike na-achọ isi n'ọdụ ụgbọ mmiri nke anwụ na-acha - karịsịa dị ka oge okpomọkụ Britain nwere. ọzọ na-akụda maka staycationers.
"Ọtụtụ n'ime anyị agbakọtala n'ụlọ n'oge mkpọchi, ọtụtụ n'ime anyị ka na-arụkwa ọrụ n'ụlọ, yabụ atụmanya izu ike n'ụlọ ezumike anyanwụ na Med bụ ihe na-adọrọ adọrọ."